रानीबारी वनलाई पंक्षी तथा जैविक विविधता अध्ययन केन्द्र बनाइने | .:: Bansanchar.com
रानीबारी वनलाई पंक्षी तथा जैविक विविधता अध्ययन केन्द्र बनाइने
काठमाडौँ । राजधानीको मुटुमा रहेको रानीबारी सामुदायिक वनलाई पंक्षी तथा जैविक विविधता संरक्षण सिकाइ केन्द्र बनाउने कार्यको थालनी भएको छ ।
परम्परादेखि नै राजाहरुको दिवाली पूजा हुने वनका रुपमा रहेको रानीबारी वि।सं। २०५७ पछि सामुदायिक वनका रुपमा व्यवस्थित र संरक्षण हुँदै आएको छ । रानीबारी वन काठमाडौँ सहरका बीचमा ६.९५ क्षेत्रफल हेक्टरमा अवस्थित प्राकृतिक वन हो ।
उक्त वनलाई रानीबारी सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति र नेपाल पक्षी संरक्षण सङ्घको सहकार्यमा जैविक विविधता संरक्षण सिकाइ केन्द्र बनाउन लागिएको हो ।
सिकाइ केन्द्र बनाउन गत भदौ १३ गते दुवै संस्थाबीच पाँच वर्षका लागि सम्झौता भएको छ । सानो क्षेत्रफल भए पनि यो वन जैविक विविधताले धनी मानिन्छ । धार्मिक र सांस्कृतिक महत्वको यो वन बिहान घुमफिरका लागि पनि उपयुक्त छ ।
रानीबारी वन सहरको बढ्दो जनसङ्ख्यालाई स्वच्छ वातावरण प्रदान गर्नका लागि मात्र नभइइ यस विषयका विद्यार्थी र शोधार्थीका लागि पनि अध्ययनको केन्द्र बनाउन लागिएको हो ।
वि.सं. २०५९ मा सो क्षेत्रमा सडक विस्तारका क्रममा वनको करिब तीन रोपनी जग्गा बाटामा जोडिएको समितिले जनाएको छ । रानीबारी वनमा हालसम्म ६७ प्रजातिका चरा भेटिएका छन् । वनमा पछिल्लो समयमा वाँदरको सङ्ख्या बढेको र तिनले दुःख दिने गरेको वरपरका बासिन्दाको गुनासो छ ।
वनमा हाल बिहान, साँझ हिँडडुलका लागि सानो बाटो, शौचालय, र खाली स्थानमा बगैँचा निर्माण अन्तिम चरणमा छ । स्थानीयवासीले वनमा एक्लै हिँडडुल गर्ने सर्वसाधारणको सुरक्षा, नजिकै रहेको प्रहरी तालिम केन्द्रबाट बग्ने ढलको व्यवस्थापन र वनमा लुकेर लागुऔषध सेवन गर्नेलाई नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा आवाज उठाएका छन् ।